दिलनि़शानीलाई ज्वालाले दिइन् घुम्नेगरी झापड – PathivaraOnline
Home > समाचार > दिलनि़शानीलाई ज्वालाले दिइन् घुम्नेगरी झापड
दिनभरीको ड्युटी सकिएपछि थाकेको शरिर घिस्याउँदै कोठा फर्कँदै गर्दा अचानक एउटी साथीको म्यासेज आयो” अए ज्वाला, त्ये दिल निशानी मगरले लेखेको स्टाटसमा किन लाईक हानेको तिमीले? थाहा छ त्यस्ले कस्तो कस्तो भाषाको प्रयोग गरेको छ त्यहाँ, अनि रबि लामिछानेलाई घुमाइ फिराइ कति ब्यंग्य गरेको छ?” म्यासेज हेरें तर हतपत जबाफ फर्काईन किनकी मैले दिल निशानी मगरको लेख नपढीकनै लाईक ठोकेकी थिँए ।
दिल निशानी मगरका लेखहरु मलाई निक्कै मन पर्छन्, उनको लेखाई अरुभन्दा अलि पृथक , रोचक र घोचक हुन्छ! उनका लेखहरु नियमित पढिरहने मैले त्यो दिन चैं पढ्ने समय पाएको थिएन किनकी लेख लामो पनि रहेछ, मलाई काममा जान हतार थियो। मैले मनमनै सोचें, “साथीले आज किन यसो भनेकी होला, के कसैसँग बिचार नमिल्दैमा उस्का लेखहरुलाई लाईक नै गर्नु नहुने हो र? के भाषाको पनि सीमारेखा हुन्छ र? बिम्ब , प्रतिक र लेखाईको ढंग पुर्याएर ब्यक्त गरिने कतिपय “छाडा” शब्दहरु पनि पढ्दा “ईज्जतवाला “लाग्छन् ।सबैको आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ नि , मान्छेहरु पनि कति संकीर्ण सोचका हुन सकेका.,! “
कोठा पुगेपछि लाईक मात्र ठोकेर घाइते पारेको दिल निशानीको स्टाटस पढ्न सुरु गरें। हेडलाइनमा लेखिएको थियो,” प्रस्टीकरण_भुलिदिनेलाई, सम्झिदिनेलाई! “
सुरुमै रबि लामिछानेको नाम पुकारेर उनको नीजि कुरा कसैले गरेको छैन , उनले आफैं पब्लिक अप्सनमा पोस्ट गरेका हुन् , त्यसैले उनको कुरामा मान्छेले चासो दिएका छन् भन्ने “चाक” जस्तो तर्कलाई खण्डन गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको रहेछ।दिले दाईलाई राम्रैसँग थाहा छ, रबिले न हिजो आफ्नो नीजि कुरा गरेका थिए,न आज गरेका छन्। उनलाई देश र जनताको समस्या सुन्न मै भ्याई नभ्याई छ! उनको नीजि जिन्दगी , नीजि पासपोर्ट र नीजि दालभात खोतल्दै हिँड्ने पहिलो ब्यक्ति नै तपाईँ हो।उनले आफूमाथी अरु बिकाउ मिडियाहरु र केहि दोस्रो रबि बन्न खोज्ने तर जति गरे नि नसक्ने तपाई जस्तै केहि फ्रस्टेशनको शिकार भएका झुण्डहरु मिलेर गरेको षड्यन्त्रको जबाफ आफ्नो फेशबुक वालबाट दिएका मात्र हुन्। त्यसैले उनले आँफैं नीजि कुरा गरे भन्ने तपाँईको हाँसउठ्दो तर्कलाई भित्तामा टाँसिने गरि दनक दिनु पर्छ।आफ्नो तर्कचाँहि “नाक” र अरुको तर्कचाहिँ “चाक”?
दोस्रो, मन नमिलेपछि , बिचार नमिलेपछि जो कोहिपनि सँगै झुण्डिएर बस्नु आवश्यक छैन। आफ्नो जिन्दगी आफ्नै सुर , ताल र लयमा चलाउने हक सबैलाई हुन्छ। त्यो तपाईलाई छ, मलाई छ र रबिलाई पनि छ। रबिले आफ्नो वास्तविक कुरा अरुले उधिनेपछि ती पातकीहरुलाई मुटु फुट्ने गरी जबाफ दिएका मात्र हुन् र दिनु पनि पर्छ। किनकी उनी अहिले सबैको नजरमा आशाको त्यान्द्रो हुन्, भरोसा हुन् र समाज परिवर्तनको मसिहा हुन्।यो काण्ड तपाइँको जीबनमा आईपरेको भए तपाई चैं मनोज गजुरेल जस्तो चुप बस्दा हुन्थ्यो किनकी तपाईलाई ३ हजारले आदर्श मान्छन् र रबिलाई तीन करोडले। जनताको आँखामा रबिप्रति पैदा गरिएको भ्रमको पर्दालाई रबिले मजाले च्याते। यस्मा तपाईलाई रबिको मात्र लिँग छैन मेरो पनि छ भनेर स्पस्टीकरण दिइरहन जरुरी नै छैन। के फरक पर्छ हामीलाई कसैको लिंग हुनु र नहुनुले। अहिलेको हाम्रो एजेण्डा लिंग होईन , देशबिकास हो।दिनमा ९ पटक सम्म यौन सम्बन्ध गर्ने केटाहरु नि देखेको छु भन्नु भो, आफ्नै अनुभब हो दाई तपाईको ? किनकि तपाईसँग फुर्सदको समय प्रसस्त छ। रबिलाई त ९ सेकेण्ड समय पनि देशको लागि दिदैमा भ्याई नभ्याई छ। बात कर्ते हो ..!
तेस्रो,तपाईँले रबिलाई केटाहरुले गाली गरिरहेका छन् र इशालाई केटीहरुले भन्नु भो। चलो ठीकै छ, तर रबिलाई गाली गर्ने केटाहरु इशाको “धर्मपुत्र” जस्तो अनि इशालाई गाली गर्ने केटी “रण्डी भालु” जस्तो लेख्नु भएको छ। समग्रमा तपाईँले महिलाहरुमाथी छुद्र र भद्दा टिप्पणी गर्नु भएको छ। हुनत तपाई महिलाहरुलाई सम्मान गर्ने लेभलको मान्छे पनि त होईन। आमा समानको भाउजु स्याहार्छु भन्ने मान्छे कस्तो हुन्छ आफैं बिचार गर्नुहोस्। र तपाईले हाम्रो जातमा दाईले गति छाड्यो भने भाइले भाउजु स्याहार्छ भन्नु भयो, यस्मा आपती भएन। तर तपाईले स्याहार्छु भनेकी भाउजु अर्कै जातकी रहिछन्। मिडियाबाट पोइ खोजेकोले मीना ढकाललाई स्याहार्छु भनेको हो भनेर आफैं भन्नु भो। तर मीना दिदीको तपाईँले यत्रो अपमान गर्दै गर्दा वहाँ आफैले यो सामान्य कुरा हो भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले अब यस्मा दोस्रो ब्यक्तिले बोलेर उफ्रेर काम छैन। मीना दिदीको दिल बहुत ठूलो रहेछ, तपाईलाई सफ़ाई दिनु भो, म भए तपाईलाई कानुनको धारामा लगेर उचालेर ,थेचारेर , बटारेर धोईपखाली अवश्य गर्ने थिएँ..!
चौथो कुरो , तपाईले हरेक देशको आफ्नो गच्छे अनुसारको सोच हुन्छ भन्दै युरोपतिर या अन्य मुलुकमा बिभिन्न बाध्यताले छरिएर रहेका नेपाली जस्ले रबिको समर्थन गरेका छन्, उनीहरुलाई रबिका भक्तजन र पुजारी भन्दै तिनीहरुको गुप्तांगमा किरा परेको भन्नु भएको छ। तपाईले यसो भनिरहँदा हिजो तपाई पनि खाडी मुलुकमा काम गर्दै , सेक्युरिटी गार्डको युनिफर्म लगाएर खाडी मुलुकको तातो भुँईमा हात टेकेर भात खाँदै प्रचण्डलाई थुक्नु हुन्थ्यो। तपाईँको चैं के मा किरा परेको थियो नि? कसैको बिरोध या समर्थन भन्ने कुरा समयको माग हो नि ब्रो..! अहिले देश यस्तो स्थितिमा छ कि कसैले अलिकति राम्रो काम गरेको आधारमा त्यस्लाई भगवान् नै मानिन्छ। यस अर्थमा रबिले त हजारौं राम्रा काम गरेका छन् नि..! उनलाई र तपाईँलाई सँगै उँभ्याएर हेरौं न त, कस्को अनुहार भगवानको र कस्को अनुहार राक्षसको जस्तो ठाउँको ठाउँ पत्ता लाग्छ।तर यसो भन्दै गर्दा तपाईलाई राक्षस म कदापी भन्न सक्दिन,किनकी तपाईले पनि गोडा तिनेक असल काम गर्नु भएको छ। जस्तै : सडक पेटीमा सुतिरहेकी महिलालाई रक्षा गर्न छेवैमा उँभिएको कुकुरको फोटो खिचेर, एकजना पागललाई मान्छेहरुले कुट्दै गरेको भिडियो खिचेर र बेला बेला मिडियामा म पनि ज्युँदै छु है भनेर आफूलाई देखाएर.,! त्यसैले तपाईँभित्र पनि भगवानको केहि अँस चाहिँ पक्कै छ।तसर्थ आफ्नो बिगतलाई अपमान गरेर आफ्नै निधारमा लात्ती नहान्नुस्..!
पाँचौं कुरो, तपाईले लेख्नु भएको छ कि “एउटा अनलाईनले मेरो मृत्युको खबर छाप्यो, मान्छेहरुले मलाई जिउँदै श्रद्दान्जली दिए, म बाँचेको छु भन्ने प्रमाणित गर्न मैले आफन्तहरुलाई फोन गर्नु पर्यो! “के लाग्छ दाई तपाईलाई? दुनिया भ्रमको सँसारमा निदाएको छ र? फिल्म तिर हिरो हरु पर्दाभित्र मरे भने उनीहरुको समाचार चाहि यदाकदा आउने गर्छ, जस्तो कि एकपटक भारतीय कलाकार अमिताभ बच्चनको आएको थियो। उनी अभिनयमा मरेका थिए, वास्तविकतामा होईन। यहि घटनालाई लिएर “आज तक” ले पनि समाचार फुकेको थियो। तर यो सब फिल्म प्रचारको लागि रचिएको नाटक थियो । तपाई न कलाकार, न नाटककार, तपाईको मृत्युको खबर कसरी बाहिरियो? आफैले मिडियालाई यस्तो समाचार बनाईदेऊ है भनेपछि बिकाउ मिडियाले त जे पनि लेखिहाल्छ नि।तपाईलाई जसरी पनि आफ्नो प्रचार चाहिन्छ , यो मलाई थाहा छ। तपाईले मीडियाकर्मीलाई आफ्नो फोटो पठाएर यो समाचार बनाईदेउ है भनेका केहि प्रमाण म सँगै छन्। आवश्यक परे पेश पनि गरौंला..! त्यसैले छोड्दिनुस् यस्तो तिलस्मि डाइलग..!
तर कहिले काँही चाहिँ मान्छेहरुले दिल निशानी दाईलाई बेकारमा गाली गर्छन्। कसैले दिले दाईले हातीको सुँड समाएको फोटोको आलोचना गर्छन्, कहिले हाँसले यौन सम्पर्क गरेको हेर्दै गरेको फोटो राखेर गाली गर्छन् त कहिले मुकुन्देसँग बसेर रक्सी र मासु खाँदै गरेको फोटो यता र उता कुदाएर बदनामै गर्न खोज्छन्। बिचरा दिले दाईको यतिसम्म खेदो किन गर्नु, जस्को क्षमता जति छ, त्यस्ले त्यति नै गर्छ। बाँच्न दिनु दिले दाईलाई वहाँको जिन्दगी। बरु एउटा कुरा चैं मेरो पनि माग छ, मुकुन्देसँग लागेर तपाई जस्तो मान्छेले हिड्नु भो भने तपाई पनि रत्नपार्कको रुखमा चढे हुन्छ।तपाईको खुट्टालाई मुकुन्देसँगै हिडाउनुस् तर टाउकोलाई हैन। तपाईको टाउको देशलाई आवश्यक छ!
अब अन्तिम: यो पढिसकेर दिले दाईलाई कसैले गाली नगर्नु होला। किनकी दिले उनै ब्यक्ति हुन्, जस्ले रबिको नकारात्मक रुपले पासपोर्टको बिरोध गरे, त्यस्को परिणाम सकारात्मक आयो, बेला बेलामा रबिको खुट्टामा ठेस लगाउने प्रयास गरे , रबिको पाइला झन् छिटो चल्यो, अहिले आएर पनि रबिको पछि मजाले दौड़िए , तर रबिले त झन् बुलेट ट्रेनकै गति लिए। रबि ब्राण्डको कट्टु समेत सोचेका दिले दाइ अब त्यो ब्राण्डको कुनै सामान बजारमा फ्याट्ट भोलि आइदियो भने के गर्छन् होला?? रबि लामिछाने फ़ाउन्डेशन त बनिसक्यो। अब उनी ब्राण्ड बन्न के बेर?? अन्त्यमा दिले दाइले एउटा गुनासो पनि गरेका छन् “ मैले यति धेरै रबिलाई तल गिराउन लागि परेकाले नै उनी आज यसरी माथी पुगेका हुन्, मलाई सम्मान पो गर्नुपर्छ त! “ कुरा ठीकै हो!
साथीहरु आउनुहोस्, अब दिल निशानी मगरलाई फूल माला र खादा लगाएर सम्मान गरौँ!
नोट: ब्यक्तिगत रुपमा म र दिल निशानी दाईबीच चेली माईतिको सम्बन्ध छ। हामी बेला बेला म्यासेन्जरमा देशको बारे बात गर्छौं। बिचारमा कहिलेकाँही गडबड हुन्छ! हामी दाजुबहिनीलाई लडाउन हाम्रो पछि लागेर हनुमाने मिडिया हरुले पुच्छर हल्लाउँदै समाचार छाप्ने काम नगर्नु ! 😉